चोरलाई चौतारो, साधुलाई सुली, काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश बेरीतपूर्वक आएको भन्दै उच्च अदालतको आदेशमा ३३ किलो सुन काण्डका आरोपी एसएसपी श्याम खत्री साधारण तारेखमा रिहा,
काठमाडौं । साउन १५ । चोरलाई चौतारो, साधुलाई सुली अब यो उखानको व्याख्या गर्नु जरुरी भएन् । यहाँ साधुहरु सुली चढीरहेका छन् तर चोरहरुको राज चली
खोलाले बगाएर नुवाकोटमा एकको मृत्यु
काठमाडौं, साउन १५ । खोलाले बगाएर नुवाकोटमा एक जनाको मृत्यु भएको छ । नुवाकोटको तादी गाउँपालिका–४ अमारे बस्ने ६० वर्षीय रामबहादुर श्रेष्ठ सोही ठाउँस्थित सातबिसे बजारबाट घरतर्फ
नेपाल प्रहरले ग¥यो अर्को प्रसंसनीय काम, अपहरणमा परेका मालपोतका सुव्वाको दुईदिन पछि भारतबाट सकुसल उद्धार
काठमाडौं । साउन १५ । अपहरणमा परेका एक सरकारी कर्मचारीलाई प्रहरीले दुई दिनपछि सकुसल उद्धार गरेको छ । सर्लाहीको धनकौल गाउँपालिका–८ धनगढा बस्ने ४५ वर्षीय रामजी
दलिय रुपमा गठन भएका निजामति कर्मचारीका संगठन विघटन हुनुपदर्छ ः खनाल
काठमाडौं । साउन १५ । प्रमूख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले दलिय रुपमा गठन भएका निजामति कर्मचारी संगठन विघटन हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । नेता
काठमाडौं उपत्यका भित्रनै बन्ने भयो धुर्मुस सुन्तलीले परिकल्पना गरेको नेपाल भित्रको “नमुना नेपाल”, धुर्मुसले भेटे काठमाडौं उपत्यका भित्रै १५ सय रोपनी जग्गा
रबिन थपलिया । काठमाडौं । साउन १४ । हाँस्य कलाकार सिताराम कट्टेल धुर्मुस र कुञ्जना घिमिरे सुन्तलीले परिकल्पना गरेको नमुना नेपाल अन्त काठमाडौं उपत्यकामानै बन्ने टुंगो
नेपाली सेनाका प्रमुख सेनानी र सेनानीहरुको सरुवा, कस्को सरुवा कहाँ ?
काठमाडौ -सैनिक मुख्यालयले ठूलो संख्यामा सैनिक अधिकृतहरूको सरुवा गरेको छ । प्रमुख सेनानी र सेनानी दर्जाका अधिकृतहरूको व्यापक सरुवा गरेको हो । सरुवा हुने प्रमुख सेनानीहरूमा– सुदर्शनबहादुर खड्का–
मलाई छोटा लुगा मनपर्ने हैन, सुहाउने भएर लगाउँछु ः रेखा थापा
काठमाडौं । साउन १४ । कुनै जमाना यस्तो थियो, रेखा थापाको अभिनयभन्दा स्कर्टको चर्चा बहुतै हुन्थ्यो । छोटा–छोटा कपडामा ठाँटिएर हिँड्ने रेखा फिल्ममा पनि यस्तै ड्रेसअप गर्थिन्
६ दिन पुरै संसार अन्धकार हुने नासाको दाबी
काठमाडौं । साउन १४ । अमेरिकी वैज्ञानिक संस्था नासाले आगामि दिनमा विशाल शक्तिशाली सौर्य आँधीका कारण छ दिन सम्म पृथ्वी पुरै अँध्यारो हुनसक्ने दाबी गरेको छ
बाबाजीबाट यसरी ठगीए नेपाली, पिडीतले दिए यस्तो बयान
घरमा माग्न अाएका साधुबाबालाई ठेचोका एकजना भाईले पाँच रुपिया दिए ।बाबाजीले त्यो नोटलाई बेरबार पारेर त्यो भाईलाई नै फिर्ता दिए र मुठ्ठी पार्न लगाए , पछि
विवादको घेरामा आईजीपी अर्याल : यी हुन् उनका कमजोरी
काठमाण्डौ । प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) बढुवा सिफारिसमा परेपछि दंग नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) मिङ्मार लामा केही दिनमै निराश बन्न पुगे । बढुवा सिफारिसमा परेको केही दिनमै
नेपाल आइडलबाट सन्ध्या आउट, कसरी आउट भइन सन्ध्या ? आयोजक भोटीङबाट लाखौं उठाउन चलखेलमा
काठमाडौं । साउन १४ । ओपो फोनको स्पोन्सरमा एपीवान टेलिभिजनबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल आइडलको गएराती भएको एलिमीनेसन राउन्डको टप ८ बाट सन्ध्या जोसी आउट भएकी छन्
७ लाख नगद सहित पक्राउ परेका जिशिअको बयान रातारात लिदैं अख्तियार
बर्दिबास साउन १४ । : घुस लिएको शंकामा पक्राउ परेका सर्लाहीका जिल्ला शिक्षा अधिकारलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बर्दिबास महोत्तरीले बयान लिइरहेको छ। बर्दिबासस्थित अख्तियार कार्यालयका इस्पेकटर
काठमाडौंको दुई यौन अखडामा प्रहरीको छापा, आपत्तीजनक अवस्थामा ८ युवती र छ युवक पक्राउ
काठमाडौं, १३ साउन । काठमाडौंका दुई यौन अखडामा प्रहरीले छापा मारेको छ । यौन अखडाबाट आपत्ती जनक अवस्थामा आठ युवती सहित छ पुरुष पक्राउ परेका छन्
काठमाडौं–निजगढ ‘फाष्ट–ट्रयाक’ निर्माणको लागि विष्फोटक पदार्थ भारतसँग लिईने निर्णय प्रक्रिया अघि बढिसक्यो ः रक्षामन्त्री प्रधान
काठमाडौं, १३ साउन । रक्षामन्त्री भीमसेनदास प्रधानले काठमाडौं–निजगढ दु्रतमार्ग निर्माणको लागि चाहिने ‘र–मटरिअल्स’ अर्थात विष्फोटक पदार्थ भारतसँग लिईने प्रक्रिया अघि बढिसकेको बताएका छन् । उनले भने,‘फाष्टट्रयाक निर्माण
फेसबुकको प्रत्यक पोष्ट बापत अंक प्राप्त गरी सामान किन्दामा छुट ? नेपाली बजारमा आयो chitooo नामको बहुउपयोगी एप्स् ,
र्निमल अर्याल । काठमाडौं । साउन १३ । नेपाली बजारमा chitooo नामको बहुउपयोगी एप्स् चलन चल्तीमा आएको छ । यो एप्स् गत ७ जुलाई बाट काठमाडौंका लागि
सिलबन्द गरेको वाइनको बोतल भित्र माकुरो भेटीयो, जनताको स्वास्थ्यमाथी गम्भीर खेलवाड
काठमाडौं । साउन १३ । वाइन पिउनु नराम्रो कुरा होइन् तर अत्याधीक र शरीरलाई हानी हुने गरी पिउनु नराम्रो कुरा हो । सके सम्म मादक पदार्थ
तेस्रो लिङ्गीले सेनामा काम गर्न नपाउने: ट्रम्प
काठमाडौं । साउन १३ । अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले तेस्रो लिङ्गी व्यक्तिहरुलाई अमेरिकी सेनामा काम गर्न नदिइने घोषणा गरेका छन्। ट्वीटरमा दिइएको श्रृंखलाबद्ध अभिव्यक्तिहरुमार्फत ट्रम्पले तेस्रो लिङ्गी व्यक्तिहरुलाई कुनै
राजपाका केन्द्रीय नेता नै फरार सूचीमा ? को को छन प्रहरीको फरार सुचिमा ?
काठमाडौं, साउन १३ . मधेशी जनताको अधिकारको लागि भन्दै आन्दोलनरत राष्ट्रिय जनता पार्टीका केहि नेताहरुनै नेपाल प्रहरीको फरार सुचिमा रहेको खुलासा भएको छ । तेस्रो मधेस आन्दोलनका
२७ बर्ष पछि रक्षाबन्धन र नागपञ्चमी आज एकै दिन, यस्तो छ धार्मीक महत्व
काठमाडौं । साउन १३ । २७ बर्ष पछि नेपालमा आज नागपञ्चमी र रक्षाबन्धन एकै दिन परेको छ । दुवै पर्व एकै दिन परेकाले बजारमा यसका बारेमा
हिमालय एअरलाइन्सको दोहा कतार उडान सङ्ख्या थप
काठमाडौं । साउन १२ । हाल दोहाको बढ्दो उच्च मागलाई ध्यानमा राखी, हिमालय एअरलाइन्स्ले यही आउँदो श्रावण १९ ( अगष्ट ३, २०१७ ) गते देखि कतारको
सरकारले दुई तिहाई पछि मात्र संसदमा संविधान संशोधन प्रस्ताव लैजाने ः प्रवक्ता भुसाल
भक्तपुर, १२ साउन । नेकपा माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा भुसालले संसदमा जब दुई तिहाई मत पुग्छ तब संसदमा संविधान संशोधन प्रस्ताव सरकारले लैजाने बताएकी छिन् । रफत
खोला तर्ने क्रममा पुल भाँच्चीएर यात्रुबाहक बस खोलामा खस्यो, दुईको मृत्यु, एक बेपत्ता, दर्जनौ घाइते
काठमाडौं । साउन १२ । खचाखच यात्रु बोकेर खोला तरदै गरेको अवस्थामा पुल भाँच्चीएर बस खोलामा खस्दा आज मध्यान्न दुई जनाको मृत्यु भएको छ भने ३२
नवनियुक्त सञ्चार मन्त्रीद्धारा बाढीले बगाएको सिन्धुपाल्चोकको दार्चा पुलको निरिक्षण, मन्त्रीले स्थानीयबासीलाई दिए यस्तो आश्वासन
काठमाडौं । साउन १२ । नव नियुक्त सुचना तथा सञ्चार मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोसी नदिमा रहेको दार्चा पुल बगाएको बारेमा आज निरिक्षण गरेका छन्
नुवाकोटमा ग्याङफाइट एक को मृत्यु, हत्यामा संलग्न पक्राउ
नुवाकोट, १२ साउन । हत्या गरेको अभियोगमा नुवाकोटमा एक युवक पक्राउ परेका छन् । दुप्चेश्वर गाउँपालिका–५ स्थित कामचोक बस्ने ४४ वर्षीय दिपक तामाङलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको
एनआरएनए अमेरीका विगठनको अवस्थामा, महासचिबको त्यो पत्र जस्ले अध्यक्ष शेष घले र महासचिब बद्री केसी बिच द्धन्द बढायो
टेक्सस अमेरिका– गैर आवासीय नेपाली संघ एनआरएन अमेरिकाको उम्मेदवारीका विषयलाई लिएर संस्थानै विघटनको अवस्थामा पुगेको छ । संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली देश अमेरिकामा एनआरएन सबैभन्दा कमजोर र विभाजित
Pages 564 : You are at page 514 of 564